I-amazon ezamahala idijithi yekhadi yesikhokhelo sekhadi | Ama-Free amazon ikhadi lamakhadi wesipho 2018
ikhaya // Blog // Free amazon isipho sekhadi lomenzi wesipho
Amahhala ama-Amazon Gift Cards kwiiFingertips zakho!
Amakhadi ezipho ze-Amazon azinakuba yi-needy-in-the-wool imfuno, kodwa iyakwenza isibheno kunye kunye nayo yonke. Emva kwakho konke, kuyindlela ekhethekileyo yokufumana i-gifting ukuthenga malunga nantoni ngaphantsi kwe-platform enkulu ye-e-commerce -Amazon. Ukuba unengxowanqa yelungu amakhadi esipho sama-Amazon, ngoko awuyedwa. Yikholwa okanye akunjalo, yinto efana nayo ebhekene nabasebenzisi be-intanethi bemihla ngemihla ngaphandle. Akumangalisi ukuba abantu baye befuna ixesha, mahhala idilesi yekhamera ye-Amazon yesipho ufana nobuqili kwi-intanethi. Ngoko ke, njani kwihlabathi ungafumana amaqhinga e-amazon amahhala? Ewe, akukhathazeki ukuba unxibe iincinci zakho zentlanzi okanye akunjalo, sinesixazululo kuwe. Ngoko, musa ukuthatha amehlo akho kule post ngaphandle.
Indlela yokufumana Amakhadi esipho sama-Amazon kwi-2018?
Kuthekani ukuba sikuxelele ukuba sinokukuzisa kwisiza esinokukhupha inani elikhulu leeakhadi ze-Amazon Gift kweso saziso ngaphandle kokubiza imali? Ekuqaleni, kunokubonakala kungakholeki. Kodwa, ngabafundi bethu baye bavuma ukuba xa behlala bejongene nathi, babeza kuthengiswa. Ukuthetha ngokunyanisekileyo, sasinomlando othukuthelayo wokungaphumeleli ekufuneni kwethu mahhala amakhadi e-Amazon 2018. Ngokuhamba kwexesha, saqonda ukuba kuninzi ngenhlanhla kunye neenjongo ezincinane. Ngako oko, kwathatha ixesha elithile ukufumanisa le khadi le sipho legolide. Ngoko, kwakungeyona enye yezinto ezifanelekileyo-zokufumana izixhobo. Kuthiweyo; asikho apha ukuvavanya umonde wakho. Ngoko, masifike kwi-part-reward immediately.
Ukusebenza amazon card ikhadi lesipho!
Yazi i mahhala ikhadi lika-Amazon isitifiketi sokuqinisekiswa komntu i-generator, enokuyenza intliziyo yakho icule. Le sayithi yimpendulo kwimithandazo yakho Amaakhadi e-Amazon angabhaso i-2018 khowudi. Ukukufutshane malunga nesiza; iyimfuneko ye-code generator card code-generator Amakhadi wesipho kwaye ubuyisela iziphumo kubasebenzisi. Ukuthembisa njengoko kubonakala, iikhowudi zisebenza kwi-platform yase-Amazon. Ngokusekelwe kovavanyo lwethu oluninzi, sinokuqinisekisa ukuba iikhowudi zisebenza kwaye zifanelekile. Ekugqibeleni, nina bantu ningalindela ukuba nenzame kunye nenu Amahhala e-Amazon isipho ikhadi ikhadi 2018 ku sukela. Siye savuya kakhulu ngomgangatho weziphumo. Ngoko ke, siye samkela isayithi ngezixhobo ezivulekile. Ngokuqinisekileyo, uya kulandela.
Yintoni ebeka lo mvelisi ngaphandle kwabanye?
Yintoni ebeka le ndawo ngaphandle kwokhuphiswano kukuba akunakufuneka uphononise ulwazi lwakho lwezezimali ngokutshintshela iikhowudi zesipho samahhala. Ngokwenene, awukho mngcipheko apha. Eyona nto ingcono, indawo leyo ayinayo i-virus. Ngoko, akuyi kubakho ukungafuneki kwi-PC yakho. Ngokusekelwe kwiingcamango zethu zokuqala, sihlolisise ngokuqinisekileyo esi siza phantsi kwe-microscope ukuqinisekisa ukuba yintsebenziswano yangempela kuba sasingafuni ukuphoxeka kwakhona. Ngethamsanqa, oku mahhala ikhadi lika-Amazon isitifiketi sokuqinisekiswa komntu jenereli idlala kakuhle. Yikholwa okanye ayikho, isebenza njenge-charm, yingako sibona abasebenzisi abaninzi bewela ikhanda phezu kwezithende kule ndawo. Siye sabonisa ngokuvuyela umlenze ophakathi kwiindawo zekhadi lesipho ezithatha ixesha lethu nemali kwixesha elidlulileyo.
Isixhobo esisemthethweni kwi-intanethi!
Ukubonelelwa ukuba kukho ezimbalwa kuphela ezisemthethweni mahhala amakhadi e-Amazon 2018 iziza ngaphandle, lihlawulela ukukhangela kwiikhowudi zamahhala ekuqaleni. Nangona isayithi ihloselwe ukuveliswa kwemali yamakhadi, awunakukwazi ukuba ikusasa elibambe isayithi. Emva koko, sithetha ngehlabathi le-Intanethi, apho izinto zitshintsha ngokukhawuleza kunesihlabathi esisuka ezandleni zezandla. Oko kuthethwa, isayithi iye yaqina ixesha elide. Ngoko, makhe silindele okulungileyo kubaphuhlisi kuba nathi sinomdla wethu. Ukuthetha ngokunyanisekileyo, akukho nto-brainer yokwenza. Ekupheleni kosuku, ubuhle beli lungiselelo kukuba yimeko yokuphumelela kubasebenzisi kunye nomnini wewebhu.
Yintoni oyilindeleyo, ibango lakho ama-gift amazon gift cards ngoku!
Ngethemba, kufuneka ukuba uzuze kakhulu kwi- amazon amazon kart card cod codes 2018 kutyhila. Ukuba awuzange uthathe amanyathelo okwamanje, ziva ukhululeke ukuluma le bullet ngokukhawuleza kuba uya kufumana iikhowudi ezininzi ezisebenzayo kwiziko elingasetyenziswa ngokukhawuleza. Njengoko kuthethwe ngaphambili, senze ukunyanzela okufanelekileyo ngaphambi kokuba siwubethe. Ngaphezu kwakho konke, asenzi umsebenzi ngokuchitha ubomi babantu. Ngoko ke, unokulandela indlela yethu ngaphandle kokuphosa. Ekubeni indawo ayihlawulanga nantoni na, akukho nto ilahlekelwa ngayo ngokukrazula. Umgangatho ungowenu wokusebenzisa inzuzo amakhadi esipho sama-Amazon. Ngoko, umjelo ixesha elihloniphekileyo wabulela inkolelo kwaye usulele ngqo kwisiza. Unokusibulela kamva ngexesha lakho lokukhulula.
51 Comments " I-amazon yama-code isipho sekhodi yesikhokelo samahhala "
Terry kwi7: 51 pm - impendulo
LWE MSEBENZI YENZA I-GUYS
Ozone_Guy kwi7: 53 pm - impendulo
Wenza oku kwiakhawunti yam abahlobo kunye nabo bonke basebenze ngaphandle kokulahlekelwa yiLitit & Worked
911 kwi3: 41 pm - impendulo
ukuba kusebenza, ngoko ndiya kuba ngumgidi-mali
ohhhhhhhhhhh yam gooooooooooood. fumana ikhadi lesipho sika-25 $
Wendy kwi6: 36 am - impendulo
Dirk kwi9: 28 am - impendulo
Spider kwi2: 16 pm - impendulo
Dash kwi7: 32 am - impendulo
omg kwi7: 16 pm - impendulo
Ndiyifumene neGC yam
Rog3r kwi10: 38 am - impendulo
Uthi umncedisi uhla
Rog3r kwi10: 40 am - impendulo
uyifumene ngoku: iphe
Ubawo waseMerika kwi7: 51 am - impendulo
wow oku kukungqinelana ngqo:]]
1337 kwi7: 36 am - impendulo
eKassándra kwi7: 37 am - impendulo
john rey kwi3: 38 pm - impendulo
indlela yokufumana ikhowudi yesipho samahhala?
john rey kwi3: 39 pm - impendulo
i i turtles kwi6: 41 am - impendulo
Idada kwi8: 25 am - impendulo
Ndiyavuma, ngumguquleli womdlalo
Wowu kwi10: 50 am - impendulo
Wooooopoooooo kwi1: 30 pm - impendulo
Ndiyabulela umntu olwabelana naye, uthumele oku kubo bonke abahlobo kunye nosapho :))
leon kwi10: 37 am - impendulo
Camo kwi7: 09 pm - impendulo
Ndifumene i-codessss yami: ppp
UJofrey kwi9: 24 am - impendulo
Ukufumana amakhadi wesipho nge-2-3 ngeveki 😀 Le ngxaki emangalisayo
Omkhulu kwi6: 33 am - impendulo
Ikhefu lesipho esilisebenzisileyo endifumeneyo ukusuka apha kwaye ibhalansi yam yazaliswa !!
UJenn kwi4: 59 pm - impendulo
avalon kwi5: 37 am - impendulo
7777777777777 kwi12: 36 pm - impendulo
Ukukhulula ikhadi lam, ukubeka umyalelo kwi-amazon ngoku!
Douche kwi7: 13 pm - impendulo
Trump555 kwi1: 36 pm - impendulo
WOWU kwi1: 56 pm - impendulo
daniel kwi8: 19 am - impendulo
Froggie kwi10: 37 am - impendulo
Ndimangalise udadewethu ngale nto
tartar55 kwi11: 33 am - impendulo
aba bantu bokwenene
DJ Santa kwi7: 51 am - impendulo
Ukufundiswa okukhulu, ukwabelana nabo bonke abahlobo bam 🙂
Beamer55 kwi5: 25 am - impendulo
CowBoy kwi2: 02 pm - impendulo
Babyloonll kwi7: 32 am - impendulo
Siyabonga, namhlanje sifika i-iPhone!
ekhuselekileyo kwi7: 48 am - impendulo
takanaran kwi8: 00 am - impendulo
Derek kwi9: 47 am - impendulo
Ukuthenga izinto ezininzi kunye namakhadi wesipho
aaaaaaa kwi11: 37 am - impendulo
Baretta7 kwi8: 45 am - impendulo
facio kwi11: 00 am - impendulo
Yenza ikhadi lika-50 ikhadi lesipho ngokulula
amy kwi8: 53 am - impendulo
Wooohooo Ndayenza kwakhona: ppp
Karl kwi12: 12 pm - impendulo
Mokka kwi3: 20 pm - impendulo
Delano kwi4: 32 pm - impendulo
Ndiyavuya kukuba ndiyifumene
xena kwi6: 31 pm - impendulo
HLEKA KAKHULU kwi4: 54 pm - impendulo
defaq kwi2: 58 pm - impendulo
Umcibi kwi9: 36 am - impendulo